Esri na-ebipụta Akwụkwọ Ọchịchị Smarter Smarter nke Martin O'Malley - Geofumadas
Julaị, 2020 ArcGIS-ESRI, blog, Cartografia, Ntụrụndụ / n'ike mmụọ nsọ
Esri mara ọkwa nke Akwụkwọ Ọrụ Gọọmentị Smarter: Akwụkwọ Nzuzo Mmezu nke izu-14 maka ịchịkwa nsonaazụ nke onye bụbu Gọvanọ Maryland Martin O'Malley. Akwụkwọ a ghapụrụ ndị nkuzi akwụkwọ nke gara aga, Ọchịchị Smarter: Otu esi achị maka nsonaazụ na afọ OziỌ na-ewepụta atụmatụ dị nkenke, mmekọrịta, mfe iji soro, izu iri na anọ nke gọọmentị ọ bụla nwere ike iso iji nweta njikwa arụmọrụ usoro. Akwụkwọ a na-enye ohere ka ndị na-agụ ya chepụta usoro maka:
Kpọkọtanụ ma kesaa ozi ziri ezi n'oge kwesịrị ekwesị
Mee ngwa ngwa dọrọ akụ.
Mepụta ndu na mmekota.
Zụlite ma nụchaa ebumnuche dị mma na akara ngosipụta arụmọrụ dị mkpa.
En Ọchịchị SmarterO'Malley sere na ya miri emi ahụmahụ mmejuputa arụmọrụ management na n'ihe ("Stat") na obodo na steeti etoju na Baltimore na Maryland. N'ihi usoro iwu ndị a, mpaghara ahụ nwere mbibi kachasị njọ nke nnukwu obodo ọ bụla na akụkọ ntolite US; Iweghachite ogo 300 afọ nke ahụike nke Chesapeake Bay na ụlọ akwụkwọ họọrọ nke mbụ na United States maka afọ ise n'usoro.
O'Malley kwuru, "Anyị mechara tufuo ọrụ dị mkpa ndị gọvanọ na-arụ." “Ha nwere iwu jikọrọ ọnụ ma na-eche nsogbu na-aga ngwa ngwa. Ndị a bụ nkà iduzi ndị na-azọpụta ndụ mgbe nsogbu dara. "
Ugbu a ndị isi nwere ike iwere usoro a pụtara ìhè ma tinye ha n'ọrụ na ndị gọọmentị nke ha na-erughi ọnwa anọ. Akwụkwọ Ọrụ Ọchịchị Ọ bụ ezigbo onye ọrụ maka Ọchịchị Smarter na imezu nkwa Stat.
Akwụkwọ Ọrụ Gọọmentị Smarter: Akwụkwọ Nzuzo Nke-Izu-Izu na Nweta nsonaazụ Enwere ya na mbipụta (ISBN: 9781589486027, peeji nke 80, $ 19.99), enwere ike inweta ya site na ọtụtụ ndị na-ere ahịa ntanetị n'ụwa niile. Ọ dịkwa maka ịzụta na Nkechi.com ma ọ bụ site na ịkpọ 1-800-447-9778.
Ọ bụrụ na ịnọghị na United States, gaa esiri ịhụ nhọrọ nke zuru ezu, ma ọ bụ na websaịtị Esri ịkpọtụrụ onye na-ere ahịa mpaghara gị. Ndị na-ere ahịa nwere mmasị nwere ike kpọtụrụ onye na-ere akwụkwọ Esri Press, Ọrụ Nkwusa Ingram.
Previous Post«Previous EGO na Loqate gbasaa mmekorita iji nyere ndi aka n’achụmnta ego aka inweta ngwa ahia
Next Post Ihe ozo ohuru nke usoro Bentley Institute: N'ime MicroStation CONNECT EditionNext »